PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-04 - Vela bahleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-04 - IINDABA - NoSonwabo Yawa
YEMADODA, kanti yintoni le nto ingathi sishwatyulelwe nje ngobu tywala?
Ubone umntu ukuba uxwebile akanazo nempahla ezi zokunxiba kodwa uyayayatheka esitalatweni phofu ungacingi into yokuba ebetsala idyasi komnye umntu, uthathe le senti yakhe yokugqibela wathenga ngayo utywala.
Andazi nokuba ndim ndedwa na lo uqaphela into yokuba xa ungena kwezi dolophana zincinci, ingakumbi kweli lam iphondo le Mpuma Koloni, ndisoloko ndizibona nokuba zintlanu iindawo ezithengisa utywala kodwa kubenzima ukubona ithala leencwadi okanye isikolo esiphakamileyo, kwaNokholeji okanye iyunivesithi!
Kanti kwenzekani? Sishwatyulelwe na Mzi oNtsundu le nto utywala bubekwa phambili sithi ngolu hlobo? Umntu athi enomsebenzi omomkelisa kakuhle angakwazi ukulinda oku kokuba atshayise ke suka yena ngexesha lesidlo sasemini abone ilithuba lokuba aye kubamba nje nokuba zimbini zintathu iibhotilana zotywala!
Noko ndiyanqanda Mzi oNtsundu, ndithi “IBUYAMBO” – ngenye imini ndimise ecaleni kwendlela ndibona umhlobo wam wakudala osele esebenza njengegosa lezendlela, basemsebenzini kunye namapolisa kuvalwe izibuko - kugqogqwa neemoto zabantu.
Kusenjalo kuthi gqi le moto isisiphekepheke asukume omnye usisi azame ukuyimisa suka ingemi idlule. Xa igqiba kudlula omnye adumise enye imoto kuba eza kuyileqa suka le moto ijike kwisiphambuka esiphambi kwethu, indlandlatheke ukuhamba ecaleni iwukhalele umgaqo.
Wonke umntu axhome amehlo, nawo amapolisa sele elalisile emva kwayo. Ithe yakuma aqalisa amapolisa ukukhwaza ukuba makaphume aphakamise izandla phezulu apho ziza kubonakala kakuhle khona.
Unkabi uphume sele ethwethwa egobile kucaca ukuba kukho le nto ayiphetheyo. Hayi ke amapolisa aqalisa ukudubula ecinga ukuba uphethe umpu, suka walala phantsi ngesisu ngethamsanqa engachanwanga mbumbulu.
Xa befika kuye lixhego eliguge ngaphaya kweminyaka engamashumi amathandathu anesihlanu. Yintoni phofu le ayiphetheyo?
Ulumkele utywala bakhe obusemagini ukuba bungachitheki, fane ucinge ukuba umntu axolele ukudutyulwa kunokuba kuchitheke utywala bakhe. Ibuyambo ma-Afrika! Ndiyanibongoza bethuna!